के तपाई अकबरे खुर्सानी खेती गरेर लाखौ कमाउन चाहानुहुन्छ ? सम्पुर्ण जानकारी सहित - krishipost.com
खुर्सानी त हामीले धेरै थरिका खाएका छौ र खाएका मध्ये पनि हामिले धेरै याद गर्ने चै अकबरे खुर्सानी हो । हेर्दा अरु खुर्सानी जस्तो ठूलो नदेखिएता पनि यस्को महत्त्व भने ठूलो छ । बजारमा यस्कै माग धेरै छ । यस्को अचार मन पराउने जमात पनि धेरै छन् । नेपालमा अकबरे खुर्सानी खेतीबाट धेरै ले मनग्ये आम्दानी पनि गर्ने गरेका छन् । नेपालमा यसलाई विभिन्न ठाउँअनुसार डल्ले, ज्यानमारा, रागे र अकबरे खुर्सानीका रूपमा चिनिन्छ । विशेष गरेर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रहरूमा डल्ले र ज्यानमारा खुर्सानीका रूपमा चिनिन्छ भने पूर्वाञ्चल क्षेत्रका पहाडी भेगहरूमा अकबरे खुर्सानीका रूपमा चिनिन्छ । अकबरे खुर्सानी धेरै पिरो र स्वादिलो हुन्छ । यसको छिप्पिएको हरियो फलमा भिटामिन “ए”, “सि” लगायत विभिन्न प्रकारका अन्य भिटामिन, खनिज तत्वहरू तथा अन्य पोषण तत्वहरू प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन् । नेपालको लागि वर्सेनि ७२,००० टन खुर्सानीको आवश्यकता पर्दछ तथा वर्सेनि #भारतबाट हरियो खुर्सानी रु १३ करोड र सुकेको रु ३५ करोडसम्मको आयात हुने गरेको पाइन्छ । नेपालमा व्यावसायिक रूपमा अकबरे खुर्सानीको खेती पूर्वाञ्चलको इलाम, तेह्रथुम र भोजपुरमा गरेको पाइन्छ भने कृषकहरूले निजी प्रयोग र जिल्लाभित्र खपतको लागि भने खोटाङ, संखुवासभा, पाँचथर, ताप्लेजुङ, ओखलढुङ्गालगायतका जिल्लाहरू मा केही उत्पादन गरेको पाइन्छ । पहाडमा कार्तिक-फागुनमा बीउ राख्ने, फागुन-चैतमा बेर्ना सार्ने र जेठ-असारमा बाली लिन सकिन्छ भने तराईमा साउन भदौमा बीउ राख्ने, भदौ असोजमा बेर्ना सार्ने र मंसिर,फागुनमा बाली लिने गरिन्छ ।
खुर्सानी खेती गर्नको लागि यि कुराहरु जान्न आबस्यक पर्छ-
१.कस्तो हावापानीमा यस्को खेती गर्न सकिन्छ ?साधरणतया गोडमेला खेती जस्तै हावापानी यसका लागि उपयुक्त हुन्छ । त्यसमा पनि यसको खेती उच्च पहाडदेखि गर्मी हावापानी भएको तराईमा समेत सजिलै खेती गर्न सकिन्छ । यसका लागि साधारणतया दिनको तापक्रम २२–२५ डिग्री से. र रातीको तापक्रम १५–२० डि.से. उपयुक्त हुन्छ । तथापी त्यसभन्दा घटी वा बढीमा पनि उतपादन गर्न सकिन्छ । तर सेपिलो तथा पानी जम्ने स्थान र बढी आद्रता भएको ठाउँमा भने उत्पादन गर्न धेरै कठिन हुन्छ ।
२.खुर्सानी खेती गर्नको लागि माटो कस्तो चाहिन्छ ?साधरणतया सबै खाले माटो उपयुक्त भएपनि पानी नजम्ने राम्रो निकास भएको मलिलो हल्का दोमट तथा केही चिम्टाईलो माटो समेत उपयुक्त हुन्छ । माटोमा प्रशस्त प्राङ्गारीक मल मिसिनुका साथै माटोको पि.एच.६–७ सम्म हुनुपर्छ । भिरालो तथा नयाँ पाखो माटो अकबरे खेतीका लागि उपयुक्त हुन्छ ।
३.एक रोपनी जमिनको लागि कति बीउ चाहिन्छ ?
४.बीउ छर्ने र बेर्ना उमार्ने तरिका के हो ?
५.खुर्सानी को बिरुवा लगाउने कसरी होला ?
२ – ३ पटक राम्रोसँग खनजोत गरी डल्ला फुटाएर झारपात केलाएर जग्गा तयार गर्नुपर्छ । माटो चिम्टाइलो भएमा पानीको निकासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । जग्गा तयार भएपछि माथि उल्लेखित मलहरू बराबरसँग छरी माटोमा राम्रोसँग मिलाउनुपर्छ । बेमौसमी उत्पादनका लागि भने वर्षाको मौसममा खेती गरिने भएकोले वर्षाको पानीबाट यसलाई जोगाउन र गुणस्तरीय उत्पादनको लागि प्लास्टिकको छानो बनाउनु आवश्यक पर्दछ । वर्षाको चिस्यानबाट जोगाउन जमिनको सतहभन्दा ३० से.मि. अग्लो ब्याड बनाउनुपर्छ । प्लास्टिकको छानो लगाई टहरो बनाउँदा लम्बाइ १० मिटर लामो र चौडाइ ५ मिटरको वा पहाड र मधेसको जमिनको अवस्था हेरी सानो–ठूलो बनाउनुपर्दछ । बहु–वर्षीय उत्पादन गर्नको लागि वर्षामा सकेसम्म पानी नजम्ने ठाउँ हेरी लगाउने र केही गरी जम्ने ठाउँ पर्न गएको खण्डमा ३० से.मि. उच्चा ड्याङ बनाई लगाउने र हिउँदमा तुषारो पर्ने ठाउँ भएमा छाप्रोका साथमा फेदको वरिपरि झारपातको छापो पनि दिनुपर्दछ ।
१ कम्पोस्ट १ (के.जी.) २. डी.ए.पी. १० प्रतिबोट (ग्राम) ३. पोटास ५(ग्राम) ४. युरिया १० (ग्राम) ५. जिंक १ (ग्राम) ६. बोरेक्स १ (ग्राम)
यी सबै मल बेर्ना सार्नुभन्दा ७–८ दिन पहिले जमिन तयार गर्ने बेलामा हरेक बेर्नाका लागि (१ फिट ह १ फिट ह १ फिट) १ घन फिटको खाल्डो बनाई माटोमा मिसाएर खाल्डो भर्ने । मल दिएपछि माटो सुख्खा छ भने हल्का सिंचाइ गर्ने ।
खुर्सानी मा लाग्ने रोगहरु-
१.डढुवा÷ढुसीबाट हुने रोग बाट कसरी बचाउने ?
2.व्यवस्थापन विधि के हो ?
५.ब्याक्टेरियाबाट हुने ओइलाउने रोग
७.सेतो धुले रोग
यो ढुसीबाट लाग्ने रोग हो । न्यानो सुख्खा मौसममा हावाबाट सर्ने रोग हो । पातहरुमा पिठो जस्तो सेतो धुलोले ढाक्दछ ।यसको रोकथाम गर्न क्याप्टान वा थिराम २.५ प्रतिकिलो बीउ उपचार गर्ने । क्याप्टान वा थिराम २.५ ग्राम÷लिटर पानीमा नर्सरीमा छर्ने ।
फल कहिले बाट टिप्न सुरु गर्दा हुन्छ?
खुर्सानीको बजार व्यवस्थापन कस्तो छ ?